ब्रिलिंटा बनाम प्लाभिक्स: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कल्याण स्वास्थ्य प्रेस कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समाचार, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण मनोरञ्जन भारी खेल घरपालुवा जनावर औषधि जानकारी, समाचार औषधि जानकारी समुदाय समुदाय, कल्याण
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> ब्रिलिंटा बनाम प्लाभिक्स: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
ब्रिलिंटा बनाम प्लाभिक्स: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
ब्रिलिन्टा (टिकग्रेलर) र प्लाभिक्स (क्लोपीडोग्रल) दुईवटा विकल्पहरू छन् रगत क्लोटहरूको गठन रोक्नको लागि। तीव्र कोरोनरी सिंड्रोम (ACS) वा मायोकार्डियल इन्फेक्शन (MI, वा हार्ट अटैक) को इतिहास भएका व्यक्तिहरूमा, रगतका थोकहरू एकसाथ क्लोम्प हुन सक्छन् र कोरोनरी रक्त प्रवाहलाई रोक्न सक्छन्। ब्रिलिंटा वा प्लाभिक्स जस्ता औषधीहरूले मुटुको वरिपरि रगत प्रवाह सुनिश्चित गर्न सक्छन् हृदयघात वा स्ट्रोक रोक्न मद्दत गर्न।
ब्रिलिंटा र प्लाभिक्स भनिने औषधीहरूको समूहको एक हिस्सा हो antiplatelet एजेन्टहरू , रक्ता पातलो, वा P2Y12 अवरोधकहरू। दुबै औषधिहरू रिसेप्टर विरोधीको रूपमा काम गर्दछन्, यसको मतलब उनीहरूले P2Y12 रिसेप्टर रोक्छन् प्लेटलेटहरू र रगतको थोक प्रमोट गर्न जिम्मेवार हुन्छन्। यी औषधिहरू सामान्यतया ACS घटना पछि कम्तिमा एक बर्षको लागि दैनिक आधारमा लिइन्छन्।
जबकि ब्रिलिन्टा धेरै जसो केसहरूमा बढी प्रभावकारी औषधिको रूपमा परिचित छ, दुबै औषधीहरूको साइड इफेक्ट र डोजमा महत्त्वपूर्ण भिन्नता छ।
ब्रिलिंटा र प्लाभिक्स बीचको मुख्य भिन्नता के हो?
ब्रिलिन्टा (ब्रिलिंटा के हो?) टिकग्रेलरको ब्रान्ड नाम हो। जेनेरिक संस्करण स्वीकृत भएको छ, तर यो अझै व्यावसायिक रूपमा उपलब्ध छैन। तसर्थ, यो औषधि प्लाभिक्स वा अन्य समान एजेन्टहरू जस्तै एफिएभन्ट (prasugrel) भन्दा महँगो हुन सक्छ।
अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (एएचए) र अमेरिकन कलेज अफ कार्डियोलोजी (एसीसी) का अनुसार, ब्रिलिंटा एक हो रुचाइएको उपचार ACS को साथ मानिसहरु को लागी। ब्रिलिंटा छिटो काम गर्दछ र एक उल्टो कार्य को मोड छ। यसमा प्लाभिक्सको तुलनामा राम्रो प्लेटलेट अवरोध र बिरामी परिणामहरू छन्।
Brilinta एक दैनिक एस्पिरिनको साथ एक दुई पटक गोली गोली को रूप मा लिईन्छ।
प्लाभिक्स (प्लाभिक्स भनेको के हो?) क्लोपीडोग्रलका लागि ब्रान्ड नाम हो। ब्रिलिंटा विपरीत, प्लाभिक्स वर्तमानमा जेनेरिक औषधिको रूपमा उपलब्ध छ। जेनेरिक प्लेटिक्स सामान्यतया रगत पातलोको रूपमा सस्तो विकल्प हो।
प्लाभिक्स एक पटक दैनिक गोलीको रूपमा लिइन्छ। ACS घटनाहरूको जोखिमलाई कम गर्न यो एक एस्पिरिनको साथ पनि लिइएको छ।
केहि व्यक्तिलाई लिभरको एन्जाइमहरूमा आनुवंशिक भिन्नताका कारण प्लाभिक्सको कमजोर मेटाबोलिज़र मान्न सकिन्छ। जो छन् CYP2C19 न्यून मेटाबोलिजरहरू प्लाभिक्सलाई प्रभावकारी रूपमा प्रक्रिया गर्न सक्दैन र बिभिन्न उपचार प्रयोग गर्न आवश्यक पर्दछ।
ब्रिलिंटा र प्लाभिक्स बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग Antiplatelet
P2Y12 अवरोधकर्ता Antiplatelet
ब्रान्ड / जेनेरिक स्थिति ब्रान्ड नाम मात्र ब्रान्ड र जेनेरिक संस्करण उपलब्ध
जेनेरिक नाम के हो? टिकग्रेलर क्लोपीडोग्रल
कुन औषधि आउँछ? मौखिक ट्याब्लेट मौखिक ट्याब्लेट
मानक खुराक के हो? तीव्र कोरोनरी सिंड्रोम (ACS):
१ 180० मिलीग्रामको प्रारम्भिक लोडि dose खुराक। त्यसो भए, ACS घटना पछि पहिलो वर्षको लागि दैनिक दुई पटक mg ० मिलीग्राम। त्यसपछि, mg० मिलीग्राम दैनिक रूपमा दुई पटक। तीव्र कोरोनरी सिंड्रोम (ACS):
Mg०० मिलीग्रामको प्रारम्भिक लोडि। खुराक। त्यसो भए, दैनिक 75 75 मिलीग्राम एक पटक।
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? १२ महिना वा लामो १२ महिना वा लामो
Brilinta मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
ब्रिलिंटा मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
शर्तहरू ब्रिलिंटा र प्लाभिक्स द्वारा उपचार
दुबै औषधिहरू एफडीए-द्वारा अनुमोदित छ ACS भएका व्यक्तिहरूमा हृदय घटनाहरूको दर कम गर्न। यी घटनाहरूमा हृदयघात, स्ट्रोक, अस्थिर एन्जाइना (छाती दुखाइ कारकहरूको कारणले हुन सक्छ जुन हृदयघातको कारण हुन सक्छ), र अन्य समावेश हुन सक्छ। मुटु सम्बन्धी सर्तहरू ।
दुबै औषधिहरूले दुई प्रकारको हार्ट अटैकलाई रोक्न मद्दत गर्दछ: ST- उन्नयन मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन (STEMI) र गैर- ST- उन्नयन मायोकार्डियल इन्फेक्शन (NSTEMI)। मुटुको धमनी पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुँदा एक स्टेमी देखा पर्छ। एक NSTEMI आंशिक अवरोध वा हृदय धमनी को संकुचन को कारणले हुन्छ।
जबकि दुबै प्रकारको मुटुको आक्रमणहरू गम्भीर छन्, एक स्टेमईलाई प्राय: अव्यवस्थितिकरणको आवश्यकता पर्दछ, वा एको प्लेसमेन्ट स्टेंट धमनी खोल्नको लागि। एनएसटीईएमआईलाई प्राय जसो रगत पातलो पार्ने एजेन्टहरूको साथ उपचार गर्न सकिन्छ, यद्यपि स्टन्ट पनि गम्भीर अवस्थामा आवश्यक छ।
त्यहाँ स्टन्ट थ्रोम्बोसिस, वा स्टन्ट प्लेसमेन्ट पछि गठन हुने रक्त क्लोट हुने ठूलो जोखिम हुन्छ, यसलाई एक percutaneous कोरोनरी हस्तक्षेप पनि भनिन्छ। थ्रोम्बोसिस रोकथाम गर्न, ब्रिलिन्टा वा प्लाभिक्स प्लेटलेटको एकत्रीकरण घटाउन र स्टन्ट वरिपरिको रगतको थक्का रोक्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यदि तपाइँ ब्रिलिन्टा वा प्लाभिक्स निर्धारित गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँलाई प्राय: दैनिक एस्पिरिन तोकिनेछ। एस्पिरिन यी औषधीहरूको साथ संयोजनमा लिईन्छ रगतको धपकनहरू रोक्नको लागि। एक एस्पिरिन र P2Y12 अवरोधको संयोजन भनिन्छ दोहोरो एन्टीप्लेटलेट थेरापी (DAPT)
सर्त ब्रिलिंटा प्लाभिक्स
तीव्र कोरोनरी सिंड्रोम (ACS) हो हो
हृदयघात र स्ट्रोक (रोकथाम) हो हो
के Brilinta वा Plavix अधिक प्रभावी छ?
ब्रिलिन्टा र प्लाभिक्स दुबै मुटुको चोटपटक, स्ट्रोक, वा अन्य हृदय रोग सम्बन्धी घटनाहरू अनुभव गरे पछि मुटु समस्याहरूको जोखिम कम गर्नका लागि प्रभावकारी देखाइएका छन्। यद्यपि क्लिनिकल परीक्षणहरूले देखाए कि ब्रिलिंटा प्लाभिक्स भन्दा बढी प्रभावकारी छ।
डबल-ब्लाइन्ड, अनियमित क्लिनिकल अध्ययनमा आधारित जुन भनिन्छ प्लेटो परीक्षण , ब्रिलिंटा प्लाभिक्सको तुलनामा हृदय मृत्युको दर कम गर्न फेला पर्‍यो। १२ महिनाको उपचारपश्चात, संवहनी कारणहरू, हृदयघात, वा स्ट्रोकको कारण मृत्यु भयो क्लोपीडोग्रल प्राप्त गर्ने ११.7% बनाम टिकग्रेलर प्राप्त गर्ने विषयहरूको 9. .8%। जे होस्, अध्ययन अन्त्य बिन्दुहरूको समीक्षा पछि, प्लेटो अनुसन्धानकर्ताहरूले पत्ता लगाए कि क्लोपीडोग्रल समूहको तुलनामा टिकग्रेलर समूहमा केहि रक्तस्राव घटनाहरूको उच्च दर थियो।
TO मेटा-विश्लेषण यसले १० भन्दा बढी क्लिनिकल अध्ययनहरूले देखायो कि टिकग्रेलर र क्लोपीडोग्रेल प्रभावकारिता र सुरक्षामा समान थिए। त्यहाँ दुई औषधि बीच कुनै महत्वपूर्ण भिन्नता भेटिए। ती टिकग्रेलर लिनेहरूले क्लोपीडोग्रलको तुलनामा सास फेर्न कम महसुस गरे।
ब्रिलिंटा वा प्लाभिक्स तपाईको लागि उत्तम विकल्प हो कि भनेर पत्ता लगाउन डाक्टरको सल्लाह लिनुहोस्।
प्लाभिक्समा सर्वश्रेष्ठ मूल्य चाहनुहुन्छ?
प्लाभिक्स मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
कसरी घर मा एक uti छिटो निको पार्ने
कवरेज र लागत ब्रिलिन्टा बनाम प्लाभिक्सको तुलना
व्यक्ति जो मेडिकेयर पार्ट डी बिरामीहरू हुन्, ब्रिलिंटा प्राय: आवरण हुन्छ। धेरै बीमा योजनाहरु पनि Brilinta कभर हुनेछ। २०१ of को रूपमा,aसामान्य संस्करण Brilinta को एफडीए द्वारा अनुमोदित गरिएको छ। यद्यपि यो व्यावसायिक रूपमा अझै उपलब्ध छैन। ब्रिलिन्टाको औसत लागत 90०० 90 ० मिलीग्राम ट्याब्लेटको लागि $ 500 भन्दा बढी छ। एकलकेयर छुट कार्ड प्रयोग गर्नाले लागत $$० भन्दा कममा कम गर्न सक्छ।
किनकि प्लाभिक्स जेनेरिक औषधिको रूपमा आउँदछ, यो प्राय: सस्तो मूल्यमा फेला पार्न सकिन्छ। धेरै मेडिकेयर र बीमा योजनाहरु यो औषधि कभर हुनेछ। अझै, ब्राण्ड नाम प्लाभिक्सको औसत खुद्रा लागत तीस 75 75 मिलीग्राम ट्याब्लेटको लागि २०० भन्दा बढी छ। एक प्लाभिक्स एकलकेयर छुट कार्डले तपाईंले प्रयोग गर्ने फार्मेसीमा निर्भर गर्दै सामान्य लागत १$ डलरमा कम ल्याउन सक्छ।
मानक खुराक Mg ० मिलीग्राम ट्याब्लेट (of० को मात्रा) Mg 75 मिलीग्राम ट्याब्लेट (of० को मात्रा)
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ 19– $ 423 $ ०– $ १
एकलकेयर लागत । 350- $ 390 $ १ +
ब्रिलिंटा बनाम प्लाभिक्सको साझा साइड इफेक्टहरू
ब्रिलिन्टा र प्लाभिक्सको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्ट ब्लीडिंग हो। सानो रक्तस्रावमा सजिलो चोट, ब्लीडिंग मसू, वा नक्कलहरू समावेश हुन सक्छ। प्रमुख रक्तस्राव घटनाहरूले आन्तरिक रक्तस्राव, मूत्र वा मलमा रगत, र बान्ता रगत समावेश गर्दछ। यदि तपाईले ठूलो रक्तस्राव अनुभव गर्नुभयो भने तत्काल मेडिकल ध्यान आवश्यक छ।
ब्रिलिंटा र प्लाभिक्सका अन्य साइड इफेक्टहरूमा सासको कमी (डिस्प्निआ), चक्कर आना, मतली, र पखाला समावेश छ।
ब्लीडिंगको साईड इफेक्ट र सास फेर्न अक्सर प्लाइक्सको तुलनामा ब्रिलिंटासँग बढी सम्बन्धित छ। केहि अनुसार तुलनात्मक अध्ययन , ब्रिलिंटाले प्लान्डिक्स भन्दा बढी रगत ब्ल्याक गरे - दुवै सानो र ठूला घटनाहरू।
भाग्यवस, एक विषादी रक्तस्रावको गम्भीर मामिलाहरूमा ब्रिलिंटाको प्रभावहरूलाई उल्टाउनको लागि विकसित गरिएको छ। किनकि प्लाभिक्स एक अपरिवर्तनीय अवरोधकर्ता हो, यसका प्रभावहरू उल्टाउनको लागि यसको खास विषादी छैन।
रक्तस्राव हो 7.7% हो .2.२%
सास फेर्न हो १.8..8% हो 8.8%
चक्कर हो %.%% हो 9.9%
मतली हो 3.3% हो 8.8%
पखाला हो 3.3% हो २.%%
स्रोत: डेलीमेड ( ब्रिलिंटा ), डेलीमेड ( प्लाभिक्स )
ब्रिलिंटा र प्लाभिक्सको ड्रग अन्तर्क्रिया
ओपियोइड्स र CYP3A4 inducers शरीरमा Brilinta वा Plavix को चयापचय वा प्रसंस्करण कम गर्दछ। यो अन्तर्क्रियाले ब्रिलिंटा वा प्लाभिक्सको स्तर घटाउन सक्छ, जुन उनीहरूले कति राम्रोसँग काम गर्दछन् कम गर्न सक्छन्।
CYP3A4 अवरोधकर्ता र CYP3A4 inducers ले ब्रिलिंटा वा प्लाभिक्सको रगतको स्तर परिवर्तन गर्न सक्दछ। CYP3A4 अवरोधकर्ताहरूले केटोकोनाजोल र एन्टिबायोटिक्स जस्तै क्लेरिथ्रोमाइसिन जस्ता एन्टिफंगलहरू समावेश गर्दछ। CYP3A4 inducers ifampin, phenytoin, र carbamazepine जस्ता औषधि सामिल छन्।
नन्स्टेरॉइडल एन्टी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स (एनएसएआईडी) र एन्टिकोआगुलेन्ट्स जस्तै वारफेरिनमा रगत पातलो हुने गुणहरू हुन्छन्। यिनीहरूलाई सँगै पिएमा रक्तस्रावको खतरा बढ्न सक्छ।
ब्रिलिंटाले स्टेटिन औषधिहरूसँग अन्तरक्रिया गर्न र उनीहरू बढाउन सक्दछ साइड इफेक्ट । यद्यपि प्लाभिक्सले स्टेटिनहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दछ, त्यहाँ कुनै ठोस प्रमाण छैन कि प्लाभिक्सले स्टेटिन थेरापीमा हस्तक्षेप गर्दछ। वास्तबमा, अध्ययन देखाईएको छ स्टेटिनहरू अझ बढि ACS भएका व्यक्तिहरूमा मृत्युको जोखिम कम गर्न सहयोगी हुन सक्छ।
औषधि ड्रग क्लास ब्रिलिंटा प्लाभिक्स
हाइड्रोकोडोन ओपियोड्स हो हो
रिटोनाभिर CYP3A4 inducers हो हो
फेनोबार्बिटल CYP3A4 अवरोधकर्ताहरू हो हो
इबुप्रोफेन NSAIDs हो हो
Lovastatin Statins हो हैन
एसोमेप्राजोल CYP2C19 अवरोधकर्ताहरू हैन हो
रिपग्लिनाइड एन्टिडायबेटिक हैन हो
ब्रिलिंटा र प्लाभिक्सको चेतावनी
दुबै ब्रिलिन्टा र प्लाभिक्सको उनीहरूको प्रयोगसँग सम्बन्धित रक्तस्रावको उच्च जोखिम छ। विशेष गरी जब रगत पातलो गर्ने अन्य औषधिहरूसँग मिसाइन्छ, ब्रिलिंटा वा प्लाभिक्सले आन्तरिक रक्तस्रावको जोखिम बढाउन सक्छ, जस्तै इन्ट्राक्रानियल हेमरेज वा जठरांत्र रक्तस्राव। ब्रिलिन्टा र प्लाभिक्स जस्ता एन्टिपलेटलेट एजेन्टको प्रयोगलाई सावधानी अपनाईन्छ यदि तपाईंसँग रक्तस्राव वा अल्सरको ज्ञात इतिहास छ भने।
ब्रिलिंटा बिरामीहरुमा शुरू गरीनु हुँदैनaकोरोनरी धमनी बाइपास ग्राफ्ट सर्जरी (CABG) जे होस्, यदि रक्तस्रावलाई यस प्रक्रियाको बखत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, ब्रिलिंटा उपचार जारी राख्न सिफारिस गर्न सकिन्छ।
ब्रिलिन्टा १०० मिलीग्रामभन्दा बढी एस्पिरिनको खुराकको साथ लिनु हुँदैन। एस्पिरिनको उच्च खुराक ब्रिलिन्टाले कति राम्ररी काम गर्दछ कम हुन सक्छ।
CYP2C19 कलेजो एन्जाइमको साथ आनुवंशिक रोग हुने व्यक्तिहरूले प्लाभिक्ससँग कम प्रभावकारिता अनुभव गर्न सक्दछन्। यो किनभने प्लाभिक्स मुख्यतया CYP2C19 एन्जाइम द्वारा प्रक्रिया गरिएको छ। यदि तपाइँ एक CYP2C19 गरीब मेटाबोलिजर हुन भनेर शंका गरिएको छ भने, तपाइँ लिन सक्नुहुनेछ परीक्षण खोज्नको लागि। यदि तपाईको शरीरले प्लाभिक्स राम्रोसँग प्रशोधन गर्दैन भने तपाईलाई बिभिन्न औषधि सिफारिस गर्न सकिन्छ।
ब्रिलिंटा बनाम प्लाभिक्सको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
ब्रिलिंटा भनेको के हो?
ब्रिलिन्टा एक प्रिस्क्रिप्शन एन्टिप्लेटलेट औषधि हो जुन तीव्र कोरोनरी सिन्ड्रोम (ACS) भएका मानिसहरूलाई उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसको सामान्य नाम टिकग्रेलर द्वारा पनि चिनिन्छ, ब्रिलिन्टा रगतको थक्काको गठन रोक्न दैनिक दुई पटक लिन्छ। Brilinta AstraZeneca द्वारा निर्मित छ।
प्लाभिक्स भनेको के हो?
प्लाभिक्स एक एन्टिपलेटलेट औषधि हो जुन ACS भएका व्यक्तिहरूको लागि एक पटक दैनिक ट्याब्लेटको रूपमा लिइन्छ। प्लाभिक्स एक ब्रान्ड नाम र जेनेरिक संस्करणको रूपमा उपलब्ध छ। ब्रिलिंटा र अन्य P2Y12 अवरोधकर्ताहरू जस्तै, प्लाभिक्स दैनिक एस्पिरिनको साथ लिइएको हो। प्लाभिक्स ब्रिस्टल-मायर स्क्वीब र सनोफी फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित छ।
के ब्रिलिंटा र प्लाभिक्स एकै छन्?
होइन। ब्रिलिंटा र प्लाभिक्स एकै होइनन्। तिनीहरू बिभिन्न तरीकाले प्रशासित छन् र साइड इफेक्ट र ड्रग अन्तरक्रियामा केहि भिन्नताहरू छन्।
के ब्रिलिंटा वा प्लाभिक्स राम्रो छ?
ब्रिलिन्टा मार्केटिंग गरिएको छ र प्लाभिक्स भन्दा बढी प्रभावकारी औषधिको रूपमा अध्ययन गरिएको छ। यो हृदय मृत्यु को दर लाई कम गर्न र हृदयघात र स्ट्रोक रोक्न को लागी एक राम्रो औषधि देखाएको छ। यद्यपि यसले प्रतिकूल प्रभावहरू उत्पन्न गर्न सक्ने सम्भावना धेरै हुन सक्छ जस्तै ब्लीडिंग र सास फेर्न। मा आधारित एएचए र एसीसी दिशानिर्देशन , ब्रिलिंटा प्लाभिक्समा भन्दा उत्तम उपचार हो।
के म गर्भवती हुँदा ब्रिलिंटा वा प्लाभिक्स प्रयोग गर्न सक्छु?
त्यहाँ छ पर्याप्त डाटा छैन Brilinta र Plavix गर्भावस्था को समयमा पूर्ण सुरक्षित छन् भनेर देखाउन। यी औषधिहरू सामान्य रूपमा सिफारिस गरिदैन जबसम्म उनीहरूको फाइदाहरू जोखिममा पर्दैन। गर्भवती हुँदा तपाईंको उपलब्ध उपचार विकल्पहरूको बारेमा तपाईंको डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस्।
के म ब्रिलिंटा वा प्लाभिक्स रक्सीको साथ प्रयोग गर्न सक्छु?
ब्रिलिंटा वा प्लाभिक्स जस्ता रगत पातलो लिनेहरू रक्सी पिउँदा बेवास्ता गर्नु उत्तम हुन्छ। यो किनभने रक्सी पनि छ रक्त पातलो गुणहरू । रक्सी पिउँदा यी औषधिहरूको प्रभावहरूलाई कम्पाउन्ड गर्न र गम्भीर रक्तस्रावको खतरा बढाउन सक्छ।
जहाँ सित्तैमा फ्लू शट प्राप्त गर्न को लागी
तपाइँले स्टन्ट पछि ब्रिलिंटा लिन कति समय लिनुपर्दछ?
Brilinta को लागी लिएको छ कम्तिमा १२ महिना एक स्ट्यान्ट प्लेसमेन्ट पछि, एक percutaneous कोरोनरी हस्तक्षेप पनि भनिन्छ। पहिलो १२ महिना पछि, ब्रिलिन्टा कम १२ डलरमा थप १२ महिनाको लागि लिनुपर्दछ। तपाइँको डाक्टरले तपाइँको ब्रुलिन्टामा कति लामो हुनुपर्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्न तपाइँको अनुवर्ती भ्रमणहरूमा तपाइँको अवस्थाको मूल्या will्कन गर्दछ।
के तपाईं कहिल्यै ब्रिलिंटा लिन रोक्न सक्नुहुन्छ?
ब्रिलिंटासँगको उपचारलाई प्रायः दीर्घकालीन मानिन्छ। तपाईको डाक्टरले ब्रिलिंटा रोक्न चाह्न सक्छ यदि तपाई यसलाई राम्रोसँग सहन वा प्रतिकूल प्रभाव भोगिरहनु भएको छ। यदि तपाईं एसीएस वा कोरोनरी धमनी रोग छ भने ब्रिलिन्टा को पनि चाँडै विच्छेद गर्नाले हृदयघात वा स्ट्रोकको जोखिम बढाउन सक्छ।
कुन सुरक्षित छ: ब्रिलिंटा वा प्लाभिक्स?
ब्रिलिन्टा र प्लाभिक्स सुरक्षा र प्रभावकारताको सर्तमा सामान्य रूपमा तुलना गर्न सकिन्छ। यद्यपि ब्रिलिंटाले बढी कारण देखाएको छ रगत प्लाभिक्सको तुलनामा सास फेर्न कम छ। दुबै औषधिहरूलाई अन्य रगत पातलोसँग प्रतिकूल प्रभावहरूको जोखिम कम गर्नबाट बचाउनुपर्दछ।
एकलकेयरमा सबै औषधिहरू All १० भन्दा कम
मास्टर सफा आहार:5छिटो तथ्य तपाइँ जान्न आवश्यक छ
कती चाँडो तपाइँ tamiflu लिन को लागी आवश्यक छ
खमीर संक्रमण रोक्न एन्टिबायोटिक मा हुँदा दही खाने